ပြင်ဦးလွင်ကရက်ရက်စက်စက် လူသက်မှုကြီး …. | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » News » ပြင်ဦးလွင်ကရက်ရက်စက်စက် လူသက်မှုကြီး ….
ပြင်ဦးလွင်ကရက်ရက်စက်စက် လူသက်မှုကြီး ….
Posted by thihayarzar on Sep 29, 2010 in News | 18 comments
ပြင်ဦးလွင်မှရက်ရက်စက်စက်လူသက် အနုကြမ်းစီးတဲ့အမှုကြီးပါ..လွန်ခဲ့တဲ့ ၂၅.၉.၂၀၁၀ ည ၇း၀၀ လောက်မှာဖြစ်ခဲ့တာပါ… ဖြစ်ပုံမှာ အသက် ( ၅၂ )အရွယ်အမျိုးသမီးကြီးတစ်ယောက်ကို ရက်ရက်စက်စက် ဓားနှင့်အချက်ပေါင်းများစွာ ထိုးပြီးတော့ ပစ္စည်းများကိုယူသွားတာပါ… ပြင်ဦးလွင်ရဲ့မြို့လယ်ခေါင် မြို့ပတ်လမ်းနံဘေး စာပန်းအိမ် ဘော်ဒါဆောင် ရုံးချုပ်နားက အိမ်ကြီးတစ်အိမ်မှာပါ … အသက် (၅၂ )အရွယ်အမျိုးသမီး တစ်ဦးတည်းနေထိုင်တဲ့ အိမ်ကြီးမှာဖြစ်ပျက်ခဲ့တာပါ .. အမျိုးသမီးဟာ ဓားဖြင့်အချက်ပေါင်းများစွာထိုးသတ်ခံခဲ့ရပါတယ်.. ထိုမိန်းမကြီးကိုသတ်သွားတဲ့တရားခံဟာ .. အသက်က (၃၂)အရပ်ရှည်ရှည်နဲ့ဖြစ်ပါတယ်… တရားခံ၏ထွက်ဆိုချက်အရ ည ၇း၀၀ လောက်အချိန်တွင်ဖြစ်ပါသည်… သူသည်အုတ်နံရံကိုကျော်တက်ပြီးအိမ်ထဲကို ၀င်ရောက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ် … သေဆုံးသူအမျိုးသမီးသည် အိမ်တံခါးများကိုပိတ်ပြီးတော့ တီဗီကြည့်နေတာပါ.. အိမ်ရဲ့နောက်ဖေးအပေါက်မှာ အသံကြားလို့ ထပြီးတံခါးဖွင့်ပြီး ကြည့်လိုက်ရာ တရားခံကအမျိုးသမီးကိုဆောင့်ထွန်းလိုက်ရာ လှဲကြသွားပါသည်… အမျိုးသမီးက ကယ်ကြပါဦး ဟုအော်ဟစ်အကူအညီတောင်းရာ တရားခံသည် အသင့်ပါလာသည့် ဓားဖြင့်ထိုးသတ်လိုက်ပါသည်… အဘယ်ကြောင့်အချက်ပေါင်းများစွာထိုးသတ်သွားသည်ကိုတော့ မေးမြန်းဆဲဖြစ်ပါတယ်… တရားခံသည် အိမ်အတွင်းမှာရှိတဲ့ သေတ္တာများကို တစ်လုံးခြင်းလိုက်လဲဖွင့်ပြီး ပစ္စည်းများကို လိုက်လံရှာပါတယ် …. ဘာပစ္စည်းမှရှာလို့မတွေ့တော့ တရားခံသည် လက်ကိုင်ဖုန်းတစ်လုံးနှင့် အိမ်ရှိဆိုင်ကယ်အား ယူပြီး မိထ္ထီလာဘက်ကိုသွားပြီး လက်ကိုင်ဖုန်းကို လိုက်လဲရောင်းချနေရာ ဖုန်းနံပါတ်အားမသိသဖြင့် နယ်မြေခံရဲများက မသင်္ကာသဖြင့် ဖမ်းဆီးထားပြီး ဖုန်းနံပါတ်များကို ဆက်သွယ်ကြည့်ရာ အမှုမှန်ပေါ်ပေါက်ခဲ့ပါတယ်….
သေဆုံးသူအမျိုးသမီးသည် ပြင်ဦးလွင်ကော်ဖီခြံတွင် အရာရှိတစ်ယောက်ဖြစ်ပါသည်.. သူသည်သားကောင်းမိခင်တစ်ယောက်လည်းဖြစ်ပါသည် … သူတွင်သားသုံးယောက်ရှိပါသည် …. အကြီးဆုံးသားသည် စစ်ဗိုလ်တစ်ယောက်ဖြစ်ပါသည် … နိုင်ငံတော်မှ ဗီယက်နမ်သို့ ပညာတော်သင် စေလွှက်ခြင်းကို ခံထားရသူဖြစ်ပါသည်….သားအလတ်သည် လည်း စစ်ဗိုလ် တစ်ယောက်ပင်ဖြစ်ပါသည် …. တိုက်ကြီးမြို့နယ် အမြှောက်တပ်တွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်နေပါသည်… သားအငယ်ကတော့ မန်းတလေး အိုင်စီကျောင်းမှာ တက်နေပါတယ်… ထိုအမျိုးသမီးကို ရက်ရက်စက်စက်သတ်သွားတဲ့ တရားခံဟာ အမျိုးသမီး အား ဓားဖြင့် (၁၂)ချက်ထိုးသတ်ခဲ့ပါသည်.. သေလောက်သည့်ဓားချက်မှာ (၉)ချက်ပါဝင်နေပါသည်….သူသည် ပိုက်ဆံနှင့် ရတနာများထားရှိ သေတ္တာကို မတွေ့သဖြင့် တွေ့ရာကိုယူကာ ထွက်ပြေးသွားခြင်းဖြစ်ပါသည်… သေဆုံးသူအမျိုးသမီးအား ၂၇.၉.၂၀၁၀ ရက်နေ့တွင် ဂူသွင်းသဂြိုလ်လိုက်ပါသည်…..
မှတ်ချက်။ ။ လူမျိုးရေး၊ဘာသာရေးထိခိုက်နိုင်သည့် အချက်အလက်တချို့ အယ်ဒီတာမှ ဖြတ်တောက်ထားသည်။ ( 9/29/2010 8:00pm PST)
ကျနော် ဒီနေ့ မေမြို့ ရောက်ခဲ့တယ်။
လမ်းဘေးမှာ မိန်းမ နှစ်ယောက်ပြောနေတာ ကြားလိုက်တယ်။
အဘွားကြီးတစ်ယောက်ကို ရက်ရက်စက်စက် သတ်ပြီးပစ္စည်းတွေယူသွားတယ် လို့ ပြောနေကြတယ်။
ကျနော်လဲ သွားရင်းလာရင်းနဲ့ မို့လို့ သေချာ နားမထောင်လိုက်ရဘူး။
သြော် ဒါကြောင့် ဈေးထည်းမှာ ရုပ်ရုပ်
တစ်ချို့ ကတော့ သနားကြတာပေါ့နော် ရက်ရက်စက်စက် သတ်သွားတာကိုး တစ်ချို့ ကြတော့လဲ မဆီမဆိုင် စစ်တပ်ကကောင်တွေရဲ့ အမေပေါ့ဆိုပြီး ဘုနေကြတယ်
တစ်ချို့ ကလည်း ကလားတွေဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ပေါ့
တစ်ချို့ ကြတော့လည်း တော်တော်ညံ့တဲ့ကလားပေါ့
ကျွန်တော်ကတော့ အမေတစ်ယောက် ပိုးဆိုးပက်စက် အသေခံလိုက် ရတဲ့သူတွေတွက် အရမ်းဝမ်းနည်းမိပါတယ်
စစ်သား ဟုတ်ဟုတ် မဟုတ်ဟုတ် မိခင် ဆုံးရှုံး၇တာဟာ သားသမီးတွေ အတွက် စိတ်အထိခိုက်ရဆုံး case ပါ..
စစ်သားအမေ မို့လို့ဆိုတာနဲ့ မဆိုင်ပါဘူး…
လူဆိုတာ ကိုယ့်ရွေးချယ်မှုနဲ့ ကိုယ်ရှင်သန်နေထိုင်နေကြရတာပဲလေ…ကိုယ့်စိတ်နဲ့ မကိုက်တာနဲ့တော့ ကောင်းတယ် မကောင်းဘူးဆိုတာ မပြောသင့်ပါဘူး..အမေ ဆိုတာ ဘယ်သူ့အမေ ဖြစ်ဖြစ် အမေပါပဲ…သားသမီးတိုင်းရဲ့နှလုံးသား..သားသမီးတိုင်းရဲ့အသွေးအသား…သားသမီးတိုင်းရဲ့အနှိုင်းမဲ့ ကျေးဇူးရှင်ပါ။
အင်း… ဘာလို့များ တစ်အိမ်လုံးမှာ အမျိုးသမီးတစ်ဦးတည်း နေရတာလဲဗျာ… စိတ်မကောင်းပါဘူး.
ကြားရတဲ့ သတင်းက စိတ်မကောင်းစရာဘဲ။ ဘာတွေများ ရန်ငြိုးတွေ ရှိနေလို့လဲ ပိုက်ဆံအတွက်များ ကွယ်.. လွယ်လွယ်ရချင်တော့ လူသတ်မိတာပေါ့..
အခုလိုမလှပသော သေခြင်းမျိုးကိုတော့ မည်သူ့ကိုမှမကြုံစေချင်ပါ။
ကြားမှာ ပြန်ပေးတာ ပြန်ယူတာ အသစ်ပြုတာဆိုတဲ့ ၀ဋ်ကြွေးတွေအားလုံးကျေစေချင်ပါတယ်ဗျာ။
မိခင်မဲ့သွားသော သားသမီးများအတွက် ၀မ်းနည်းကြောင်းပါဗျာ။
ဒီသတင်း တင်ပေးတဲ့အတွက်ကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် တင်ပေးတဲ့သူမှာ လူမျိုးရေး မုန်းတီးမှုများ ရှိသနေလား ထင်ရအောင် မလိုအပ်တဲ့ သတင်းအချက်အလက်ကို အတင်းကာရော ထည့်ထားတဲ့ အတွက် စိတ်ပျက်မိပါကြောင်း။
စိတ်မကောင်းစရာပဲ အသေဆိုးနဲ့သေရတယ်လို့ …။
Machitsu ပြောသလိုလူမှူရေးမုန်းတီးမှူတွေတင်ပေးတဲ့လူမှာရှိမရှိတော့မသိပေမဲ့ သတ်သွားတဲ့လူနာမည်အတိကျမသိရသေးခင် သူပုံပန်းသွင်ပြင်ကြည့်ပြီး ကုလားလို့ပြောတာ မလိုအပ်တဲ့သတင်းအချက်လက်ကိုအတင်းကာရော ထည့်ပေးရာမရောက်ပါဘူး။
လူတယောက်လုံးကိုတောင် ရက်ရက်စက်စက်သတ်သွားရက်ခဲ့တဲ့ အပြစ်သားရဲ့ နာမည်မှမသိပဲ ခေါ်တတ်သလိုခေါ်တော့မှာပေါ့ ။
်သတ်မှတ်ချက်တစ်ခုခေါ်တာဟာ သူ့အပြစ်တွေနဲ့ နှိုင်းစားရင် အပြတ်သတ်ကွာပါတယ် ။
မချစ်စုပြောတာ ထောက်ခံပါတယ်။ ဘာကြောင့် လူမျိုးရေးဆန်တဲ့ စာလုံးတွေကို မလိုအပ်ပဲ ထည့်ရေးရမှာလဲ။ အခုဟာက လူမျိုးရော ဘာသာရော နှစ်ခုစလုံး ပါနေတာတော့ ဆိုးပါတယ်။ အထူးသဖြင့် ကိုယ်နဲ့ကွဲပြားခြားနားတဲ့ အုပ်စုတွေကို ရည်ညွှန်းတဲ့ ပုဂ္ဂလိက ခံစားချက်တွေကို အများနဲ့ဆိုင်တဲ့ နေရာတွေမှာ သိုသိုသိပ်သိပ်ရေးတာ သင့်တော်ပါလိမ့်မယ်။ ကျွန်နော်တို့လည်း အရင်က ကိုယ့်တိုင်းပြည်မှာ ကိုယ်နေတော့ သိပ်ပြီးနားမလည်ခဲ့ဘူး။ ပြည်ပရောက်လို့ ကိုယ်ကလူနည်းစုဝင် ဖြစ်သွားရင် စာနာနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ ကမ္ဘာမှာ မြန်မာဆိုတာ သေးသေးလေးပါ။
အသားမည်းမည်း မြင်ရင် ကုလား၊ ဖြူစွပ်နေတာမြင်ရင် တရုပ်၊ ရွှေရောင် ဆံပင်လေးနဲ့ များ မြင်ရင် ဘို ဆိုပြီး အလွယ်တကူ ခေါ်ကြတာကို အပြစ်မပြောလိုပါ။ ဒါပေမယ့် သိက္ခာရှိတဲ့ သတင်းစာ၊ အဆင့်အတန်းရှိတဲ့ သတင်းထောက်တို့ ရဲ့ သတင်းတွေမှာ ပြစ်မှုပြုလုပ်သူဟာ ဘယ်ဘာသာဝင် ပါလို့ဘယ်တုန်းကမှ မဖော်ပြကြပါဘူး။ ဘယ်တုန်းကမှလဲ မဖတ်မိဖူးပါဘူး။ သတင်းက သတင်း မဖြစ်ပဲ အတင်းသဘောဆန်နေလို့ထောက်ပြတာ တစ်ခုပါပဲ။ ကျွန်မ ဘယ်သူနဲ့ မှ စကားအခြေအတင် မပြောလိုပါ။ လွန်တာရှိ ဝန္ဒာမိပါ။
ဟိန္နူ ကို (ကုလည်) ၊ မွတ်ဆလင် ကို (ကုလား) လို့ အကြမ်းဖျင်း ခွဲ နိုင်ပေမယ့် ၊ ကုလားရုပ်၊ကုလားမျိုးဖြစ်ပြီး ဗုဒ္ဒ ဘာသာကိုးကွယ်တဲ့ သူတွေရှိနေတယ်လေ ။ တရုပ် မျိုးလို့ ပြောပြီး အန်းကုန်း တို့ ၊ သရဲကြီး တို့ ပူဇော်နေတဲ့ ၊တရုပ် စာကို (၁။၂။၃။၄) လောက်သာရွတ်ပြီး အတယ် ၊ အားမား လုပ်နေတဲ့ ငချိပ်တရုပ်တွေလဲ ရှိနေတာဘဲလေ ။
ကျွန်တော်ဟာ ကုလားများကိုအရမ်းမုန်းပါသည်….. မွေးကတည်းကကို မုန်းတာပါ …. ဘာလို့ရယ်တော့မသိဘူးဗျ …. သိတာတွေတော့ မပြောပြတော့ပါဘူး …. ဒါပေမဲ့ အခုလူသတ်တရားခံဟာ ကုလား(မွတ်ဆလင်)တစ်ယောက်ဖြစ်ပါသည်…. ပြစ်မှုဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ အိမ်နားလေးကပါ …. အထင်ကိုပြောတာ မဟုတ်ပါဘူး ….. မယုံရင်နီးစပ်ရာကို စုံစမ်းကြည့်ပါ…..ကျွန်တော်လည်းနောက်ထပ်မရောက်သေးတဲ့အတွက် ပြည့်စုံအောင် မတင်နိုင်တာ ခွင့်လွှက်ပါ ….
သြော် … တော်ကြာနေ ကိုယ်မွေးလာတဲ့ သားသမီးလေးတွေက ကုလားသွေးလည်း မပါရပါပဲနဲ့ကုလားရုပ်ကလေးများ ထွက်လာပါဦးမယ်။ စိတ်ကိုလျှော့ပါရှင်။
တကယ်တော့ ဒီစာပုဒ်ကလေးဟာ သတင်းတစ်ပုဒ်ဘဲဖြစ်ပါတယ်။
သတင်းရဲ့ သဘောဟာ ဒီလို ရှိရပါတယ်လို့လူတစ်ယောက်က ပြောတာပေါ့ဗျာကျွန်တော့်ကို
ဥပမာ သေနေတယ်ပေါ့ လူတစ်ယောက် ထားပါတော့ရွာသူကြီး ကျွန်တော်ဆိုလည်းရပါတယ်
ပိုးစိုးပက်စက်ကြီးပေါ့ဗျာ သတင်းသမားဟာ သေဆုံးသူနှင့် တရားခံ ကို မိမိလိုသလို ရေးလို့ မရပါဘူး။
သက်ဆိုင်ရာမှု့ ခင်းဌာနရဲ့ ထုပ်ပြန်ချက်ကို ကိုးကားလို့ ရပါတယ်။ သက်ဆိုင်ရာကလည်းကိုယ်လိုသလို ထုတ်ပြန်လို့ မရနိုင်ပြန်ပါဘူး
စာအုပ်ထည်းက ကိုဒဥပဒေကိုပြောတာပါ ကျန်တာတော့တိဝူး
စိတ်မကောင်းစရာပဲ ။အဝေးရောက်နေတဲ့ သားတွေ ဘယ်လိုဖြေမလဲမသိဘူးနော် ။ ရိုးရိုးသေတာဆိုတမျိုးဖြေသိမ့်လို့ရတာပေါ့ ။ အဲလိုကြီးဆိုတော့ တကယ်မခံစားနိုင်ဘူး။
သနားဖို့ကောင်းတဲ့ ဖြစ်ရပ်လေးပါပဲ ဒါပေမယ့် ဘယ်သူမို့ ဘယ်ဝါမို့နဲ့ မဆိုင်ပါဘူး လူတိုင်းမိခင်ဆုံးရှုံးမှာကိုတော့ ကြောက်ကြတာပါပဲ ပစ္စည်းပဲယူရင် တော်ပြိပေါ့ လူပါသတ်စရာလား မေတ္တာမဲ့တဲ့ လုပ်ရပ်မျိုး နောက်ထပ်မဖြစ်ကြပါစေနဲ့